saarayaasha Isomaltooligosaccharide jumlada iyo alaab | Tong Rui Bio-Tech
The galleyda jilicsan waa wax cayriin ee Isomaltooligosaccharide ah.
Isomaltooligosaccharide waa waxyaabaha cad budada ah sonkorta noqde iyada oo doorka eulayska, ka dib markii liquefaction, fiirsashada, qalajiyo iyo taxane ah oo geedi socodka ka mid ah delication. Iyada oo hawlaha biyo fiber cuntada milma, waxa ay si weyn u hagaajin karaa badashada bifidobacterium jirka ee. Its qiimaha calorific hooseeyo hortagi karaa sifooyinka sida caries.So ilkaha waa nooc ka mid ah oligosaccharide functional iyo waxaa si balaadhan looga isticmaalo.
Product kala soocidda: IMO-500 IMO-900
Product Name: Isomaltooligosaccharide
Source Botanical: Tapioca ama Corn Budada, D-Isomaltose
Isku dayo: 50% 95%
Color: White oo ur leh dabeecad iyo dhadhan
calool -Prevent, kor loogu qaado difaaca jirka,.
-Resistant ka dhanka ah suuska ilkaha sida sonkorta ah Dhawa fermentable ,, ma loo isticmaali karo bakteeriyada ilkaha qalalaya.
tamardhac -Low, uma siyaadiyo Waxaan qiimaha tamardhac cuntada.
-It gaar ahaan ku haboon ee bukaanada qaba cudurka macaanka.
Jaceylka macaaneeye, waxaa loo isticmaalaa warshadaha cuntada;
-Waxaa isomalto-oligosaccharide hortago constipationn, kor loogu qaado difaaca jirka, yareeyo dufanka dhiigga oo kolestarool ah iyo dhinacyo kale oo quseeya, khuseeyaan waxyaabaha daryeelka caafimaadka, wax soo saarka caanaha, casiirka functional, nacnac functional, samaynta khamri, xasho, calafka, iwm ...
Previous: xidid likorays soosaaray
Boswellia Serrata soosaaray